Real Madrid Oo Guul Ka Soo Gaadhay Malaga Iyo Francisco Isco Oo Ku Lug Yeeshay Goolasha Ay Los Blancos Ku Soo Garaacday Kooxdiisii Hore. – GOOL24.NET
Real Madrid Oo Guul Ka Soo Gaadhay Malaga Iyo Francisco Isco Oo Ku Lug Yeeshay Goolasha Ay Los Blancos Ku Soo Garaacday Kooxdiisii Hore.
Real Madrid ayaa guul ka soo gaadhay kooxda Malaga inkasta oo uu Zinedine Zidane nasiyay ciyaartoy kooxdiisa muhiim ka ah. Los Blancos ayaa 2-0 ku soo garaacday kooxda ay martida u ahayd ee Malaga iyada oo Francisco Isco uu gool ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Malaga halka Casemiro uu raacsaday goolka labaad.
Dhamaaadkii ciyaarta Malaga ayaa hal gool la timid kaas oo waqtigii uu saamaynta yeelan lahaa ka soo daahay waxaana goolkan u dhaliyay Diego Alejandro Rolan laakiin waxa uu ahaa gool aan micno u yeelan kooxda martida loo ahaa ee Malaga.
DAQIIQADII 29 AAD ayay Real Madrid heshay goolkeeda furitaanka kaas oo ahaa kubbad laaga xorta ah oo uu Francisco Isco ka soo tuuray banaanka xerada ganaaxa isaga oo wax gool badbaadin ah u diiday goolhaye Roberto wuxuuna Isco ciyaartaka dhigay 1-0 ay Los Blancos hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Laakiin Isco ayaa iska diiday in uu ku dabaal dego garoonkii uu waayihiisa ciyaareed sida wayn sare ugu soo qaaday isaga oo ixtaam wayn u muujiyay jamaahiirta iyo kooxdiisii hore ee Malaga. Goolkan ayaa ahaa kan labada kooxood kala saraayay qaybtii hore ee ciyaarta.
Balse Real Madrid ayaa qaybtii hore ahayd kooxda natiijo ahaan iyo ciyaar ahaanba ka saraysay kooxda martida loo ahaa ee Malaga oo awoodi wayday in ay qaybtii hore wax jawaab ah ka bixiso goolka uu xidiga ree Spain dhaliyay waxaana lagu kala nastay 1-0 ay Madrid hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Real Madrid ayaa wali sii ahayd kooxda laga filan karayay goolal kale halka Malaga ay ku dhibtoonaysay in ay ka soo kabsato goolkii qaybtii hore ee ciyaarta hogaanka looga hayay.
DAQIIQADII 63 AAD Real Madrid ayaa ciyaarta hurdada u dirtay waxayna Malaga ugu quus goysay goolka labaad waxaana markan shabaqa soo taabtay Casemiro laakiin markale Isco ayaa sameeyay caawinta goolkan isaga oo xidiga ree Brazil siiyay fursada uu goolkan ku dhaliyay waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Los Blancos hogaanka ku dheeraysatay.
Intaa wixii ka danbeeyay ciyaarta ayaa noqotay mid lagu kala calaf qaaday waxayna Malaga ka quusatay in ay wax soo laabasho ah samayn karto. Dhamaadkii ciyaarta Zidane ayaa waqti siiyay da’yarka Borja Mayoral iyo Dani Ceballos isaga oo saaray Marco Asensio iyo Isco.
DAQIIQADII 93 AAD ee dhamaadkii ciyaarta Malaga ayaa heshay goolka calanka ee waqtigii uu saamayn ciyaarta ku yeelan lahaa ka soo daahay waxaana Navas u diiday in uu shabaq nadiif ah la baxo u diiday Diego Alejandro Rolan kaas oo ciyaarta ka dhigay 2-1 ay Madrid wali guul ugu taagan tahay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Real Madrid guul raaxo leh kaga soo gaadhay kooxda Malaga waxayan Real Madrid 32 kulan ka heshay 67 dhibcood iyada oo wali 4 dhibcood ka hoosaysa kooxda ay baacsanayso ee Atletico Madrid oo kaalinta labaad 71 dhibcood ugu jirta.